आज चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै, के-के छन् भ्रमणका एजेन्डा ? - AmsancharAmsanchar
आज चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै, के-के छन् भ्रमणका एजेन्डा ?
काठमाडौँ, ११ चैत । चीनका विदेशमन्त्री एवम् स्टेट काउन्सिलर वाङ यी तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज (शुक्रबार) काठमाडौँ आउँदै छन् । उनी भारत हुँदै आज काठमाडौँ आउन लागेका हुन् ।